Manjaro 19.0, yatovepo mukutarisa kwayo kwekutanga, ichatanga dingindira nyowani | Linux Vakapindwa muropa
Manjaro yakwanisa kuve imwe yeanonyanya kuzivikanwa maLinux kugovera pane ayo ega merit. Uye zvakare, ichave ichiwedzera nekuwedzera kukosha sezvo yakamira kungori chirongwa chekuve kambani izere. Iyo yakanyanya kuvandudzwa vhezheni ndeye v18.1.5, asi unogona kutoedza a Manjaro 19.0 izvo zvichauya pamwe neshanduko idzo vamwe vangade uye vamwe vangangodaro vasingadi. Tiri kutaura nezve shanduko mune yayo interface.
Kunyanya kutaura, izvo Manjaro GmbH & Co KG inovimbisa ndeyekuti inotevera vhezheni yayo inoshanda sisitimu ichauya nemusoro mutsva wenyaya iyo iwo maviri ma Screenshots aunogona kuona mune ino chinyorwa akaburitsa. Ivo havana kupa rwakawanda ruzivo nezvazvo, chete kuti i nyowani mweya2 theme yomushandisi @bogdancovaciu uye iyo yakagadzirirwa kuverengerwa muiyo KDE vhezheni yeanoshanda system.
Manjaro 19.0 KDE Edition ichasvika iine nyowani mweya2 theme
Pano panouya chekutanga testbuild yeiyo inotevera vhezheni yeManjaro-KDE 19.0, iine nyowani yekufema2 misoro kubva @bogdancovaciu. Uku ndiko kuvaka kushoma pabazi rekuyedza. Zvizame uye tinzwe zvaunotaura!
Sezvatinoverenga mune zvishoma ruzivo rwavanotipa, ndezve iyo yekutanga yekuyedza vhezheni yechikamu chinotevera cheManjaro uye inosanganisira dingindira idzva reiyo KDE vhezheni, asi ivo vanotikumbira kuti tiongorore mashandiro uye tivaudze zvatinofunga nezvazvo. Tichifunga nezvekuti chinhu chega chavakataurira kwatiri shanduko yemufananidzo, tinonzwisisa kuti izvo zvavanofarira kuziva zvatiri kufunga nezvenyaya nyowani.
Manjaro Arch Linux based operating system uye saizvozvo inoshandisa modhi yekuvandudza yerudzi Kutenderera Kuburitswa. Ivo havana kutaura kuti vachaburitsa Manjaro 19.0, asi vashandisi varipo vachakwanisa kusimudzira vhezheni itsva kubva kune imwecheteyo sisitimu sisitimu painongoburitswa vhezheni yacho.
Vashandisi vanofarira vanogona kurodha pasi rino rekutanga kuona kubva Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Manjaro 19.0 KDE, ikozvino inowanikwa mune yayo yekutanga kesi vhezheni, ichaburitsa dingindira nyowani
Ndiri kutotanga kutsemuka muchina chaiwo …… kunyangwe ini ndisingatarisire shanduko yakawanda.
yakanaka sei distro
Kwandiri iyo yakanakisa distro, asi nezve zvandinofarira, yega yega ine yayo.